Wp/shn/မိူင်းငႄးလူင်၊ ဝဵင်း - Wikimedia Incubator
< Wp‎ | shnWp > shn > မိူင်းငႄးလူင်၊ ဝဵင်း
ၵူဝ်ႇဢေႃးတိၼဵတ်ႉ: 23°34′33″N 98°05′55″E﻿ / ﻿23.575966°N 98.098618°E﻿ / 23.575966; 98.098618
5,194 ထတ်း (1,583 မီႇတႃႇ)
ဝဵင်းမိူင်းငႄးလူင် (IPA: [mɤ́ŋ ŋɛ́ lǒŋ]), (မၢၼ်ႈ: တာမိုးညဲမြို့), (ဢင်းၵိတ်ႉ: Tamoenye ), (သဵင်ဢွၵ်ႇ [Moengnyelong] ၼႆႉ မီးၼႂ်း ၸႄႈဝဵင်းမူႇၸေႊ၊ ၸႄႈတွၼ်ႈမူႇၸေႊ၊ ၸႄႈမိူင်းတႆး၊ မိူင်းမျၢၼ်ႇမႃႇသေ ပဵၼ်ဝဵင်းဢၼ်မီးၸၼ်ႉ ၵိင်ႇၸႄႈဝဵင်းဢၼ်ၼိူင်ႈယဝ်ႉ။
↑ ခရိုင်မြေပုံ - ရှမ်းပြည်နယ် (မြောက်ပိုင်း). မြန်မာသတင်းအချက်အလက် စီမံခန့်ခွဲမှုယူနစ် (စက်တင်ဘာ ၂၀၁၆). Retrieved on ၁၇ မတ် ၂၀၁၇။
Retrieved from "https://incubator.wikimedia.org/w/index.php?title=Wp/shn/မိူင်းငႄးလူင်၊_ဝဵင်း&oldid=4349903"